Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eToronto naseKingston, eJamaica eSwoop ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Swoop isungula inkonzo engapheliyo phakathi kweToronto Pearson International Airport kunye neKingston Norman Manley International Airport eJamaica.
USwoop ubhengeza iindiza ezintsha ezingapheliyo eJamaica.
Inkonzo entsha iya kusebenza kabini ngeveki.
Inkonzo entsha iya kuba yinxalenye yeshedyuli yasebusika kunye nokwazisa ngoDisemba 8, 2021.
I-Swoop namhlanje ibhengeze inkonzo engapheliyo phakathi kweToronto Pearson International Airport (YYZ) kunye neKingston Norman Manley International Airport (KIN) eJamaica. Njengenxalenye yeshedyuli yasebusika yenqwelomoya, inkonzo entsha izakusebenza kabini ngeveki, ukuqala nge-8 kaDisemba, 2021.
"Kuyasivuyisa ukwandisa ubukho bethu eJamaica ngokungeniswa kwenkonzo eKingston ukudibanisa izihlobo kunye neentsapho ngeli xesha leholide kunye nonyaka ozayo," utshilo uBert van der Stege, iNtloko yezoRhwebo nezeMali, Swoop. "Abakhenkethi bethu bazamkele iinqwelomoya zethu ezifikelelekayo eziya eJamaica kwaye sijonge phambili ekwakheni impumelelo yethu kulo mmandla ngenkonzo yethu entsha engapheliyo edibanisa iToronto neKingston."
Umphathi wexabiso eliphantsi (ULCC) usekwe ukuba aqhubeke nenkonzo phakathi kweToronto Pearson International Airport (YYZ) kunye Isikhululo senqwelomoya saseMontego Bay Sangster (MBJ) ngomso ngo-7: 00 ekuseni EST. Ukubuyela kukaSwoop eMontego Bay kuphawula ukuqala kokubuyiselwa kweenqwelomoya kwinethiwekhi yamazwe aphesheya, ngeenqwelomoya eziya e-US naseMexico zisetwa ukuba ziqhubeke ngokuwa.
“Ukubuya kwe Swoop kwi-MBJ yamkelekile kwaye sonwabile kukuzibophelela kukaSwoop ukuqinisekisa ukuba abakhweli abavela kwintengiso yethu yesibini ngobukhulu, eCanada, ngakumbi iphondo lase-Ontario, banendlela enexabiso eliphantsi xa betyelele iJamaica ukubona usapho kunye nabahlobo okanye abo banqwenela Ukuya eholideyini kwisiqithi sethu esihle, utshilo uShane Munroe, umphathi we-MBJ Airports Ltd. Isiqithi sethu saseJamaica. ”
Iinkcukacha zeNkonzo yeSwoop eKingston naseMontego Bay, eJamaica
Umzila UkuQalwa okuCwangcisiweyo
Ubuninzi Iyonke indlela enye
Ixabiso (CAD) Imali yesiseko
(CAD) Iirhafu kwaye
ENTSHA iToronto (YYZ) -Kingston (KIN) Disemba 8, 2021 2x ngeveki $129† Cad $13.44 $115.56
ENTSHA iKingston (KIN) - iToronto (YYZ) Disemba 8, 2021 2x ngeveki $129 † Cad $6.36 $122.64
I-Toronto (YYZ) -Montego Bay (MBJ) Septemba 11, 2021 3x ngeveki $129† Cad $13.44 $115.56
IMontego Bay (MBJ) - iToronto (YYZ) Ikamva